Na-akpakọrịta Social Media Detractors | Martech Zone
Jason Falls nke Onye nyocha ihe ọhaneze bụ ezigbo mmadụ na otu n'ime ndị ahụ anaghị m ekwenye mgbe niile mana ana m asọpụrụ. Jason nọ na ọgụ oge niile - ya na ndị ahịa na-arụ ọrụ iji zụlite usoro mgbasa ozi mmekọrịta ha.
Otu ndụmọdụ dị ukwuu nke m na-akọrọ onye ọ bụla bụ usoro Jason maka ndị na-emebi iwu na ntanetị - anụrịrị m ka ọ na-ekwu maka ya na Blog Indiana na 2010.
Gota ruuru ha ime mkpesa.
Rio mgbaghara, ọ bụrụ na akwadoro.
Tinye, ọ bụrụ na akwadoro.
Nyochaa ihe ga-enyere ha aka ka mma.
Iwu ya mere, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Akpa - oge ụfọdụ a jerk bụ jerk.
Site na mgbe ị kpebiri na nkwụsị bụ ụzọ kachasị mma, ndị na-ahụ maka ịntanetị ga-ekpebi otu ihe ị nwere. Ọtụtụ mgbe, ndị na-eso ụzọ gị ga-agbachitere gị mgbe nke a mere.
Nzaghachi nye ọnọdụ na-adịghị mma n'ịntanetị na-akọwakarị ụlọ ọrụ na ihe ọ dị ka isoro ha rụọ ọrụ. Onye njem ala ahịa nwere ihe atụ dị egwu banyere otu BGH respond ịzaghachi nkatọ na-adịghị mma n'ịntanetị. Ihe atụ bụ a Pizza shop onye nwetara a na-adịghị mma Yelp nyochaa…. ọ bara uru ịgụ ya!
Tags: abdicatekwetaMee!rịọ mgbagharakwusinyochajason daransogbu mgbasa ozi mmekọrịta
Nnukwu nchịkọta nke panel Friday, Doug.
Enwere m obi ụtọ ịnọdụ ala na ngosi Duncan Alney na Satọdee nke isiokwu ya bụ: Online Reputation Management. Ọ bụ ezie na ihe ọmụma Jason nyere na-enye ihe ọmụma dị ukwuu, echere m na ọ bụ Duncan buuru m isi ihe ndị a. Ọbụna ihe bara uru karị bụ ọdịiche dị na ma ọ bụ nzaghachi ka enyere onye na-eme mkpesa na mbụ, dị ka etinye ya, 'ụfọdụ ndị bụ ndị mkpesa na-adịghị ala ala'. Ihe a bụ oge ịmara ma ọ bụrụ na azịza azịza ya dị ka ọ dị * otu esi eme ya.
Ihe a niile na-alaghachi na nghọta. Dika usoro mgbasa ozi na-eto ngwa ngwa na ngwa ngwa, ụlọ ọrụ ndị "anaghị enweta ya" ga-esiri ike ijide. Ndị imeghari ga-abụ ndị na-adị ndụ. Ha nwere ike iche banyere ya dị ka nke a: ị gaghị ekwe ka onye ọrụ gị na-akwọ ụgbọala n'azụ ụgbọala nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ n'okporo ámá na-ekwo ekwo, yabụ gịnị kpatara ha ga-eji hapụ ndị mmadụ ka ha na-elekọta mbọ mgbasa ozi mmekọrịta ha na-eme otu ihe ahụ? Ọtụtụ mgbe, ụzọ abụọ ị na-esite na nsonaazụ na nsonaazụ na-ata ahụhụ.
Edere m ụfọdụ n'ime okwu sitere na post na ntinye na google ma chọta ọkwa mbụ na arụmụka ahụ ka na-ewe iwe. O nwere ndị hụrụ ebe ahụ n’anya na ndị kpọrọ ya asị. Lọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ mechiri ruo otu afọ n'ihi nsogbu ahụike ma meghee, mana arụmụka ahụ ka na-aga n'ihu. N'ihe banyere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ihe nyocha dị njọ na-ewute karịa ezigbo nyocha n'ihi na ọ dịghị onye chọrọ ịla ego n'iyi na enwere ọtụtụ nhọrọ. Otu ihe jikọrọ na nyocha niile na-adịghị mma bụ na otu n'ime ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ, onye nwe ya n'onwe ya, ndị ọrụ ya, onye ọ bụla mere ihe jọgburu onwe ya. Nke a mere ka m kwenye na enwere omenaala.
Nke a bụ eri na Yelp: http://www.yelp.com/biz/amys-baking-company-scottsdale#hrid:c6GfpA9j5HAVJIbK6D50Vw